Fanatanjahan-tena 6 hanoherana ny sciatica sandoka | Fiofanana, fanitarana, fanitarana, torohevitra sy fanatanjahan-tena.
6 Fanazarana hanoherana ny sciatica diso
30 / 07 / 2016 /Fanamarihana 0/i Fanazaran-tena sy fanatanjahan-tena/av loza
Fanatanjahan-tena 6 afaka manafaka sciatica diso. Ireo fanazaran-tena ireo dia mety hampihena ny fanaintainana amin'ny fitiliana ny sciatica diso ary hanamaivana ny soritr'aretina, ary koa manome fiasa tsara kokoa amin'ny faritra. Raha manana fanontaniana momba ny fanazaran-tena ianao na amin'ny fiofanana dia azafady mba hifandraisa aminay Facebook na YouTube.
Bonus: Mikorisa etsy ambany raha hijery horonantsary fampiofanana miaraka amina fanazaran-tena tsara manohitra ny sciatica diso - ary horonan-tsary mampiseho fanazaran-tena mety hisorohana ny fanaintainan'ny nerveo sy ny taratra amin'ny tongotra.
Lahatsary: ​​Fanaovana fanatanjahan-tena 5 amin'ny tongotra miorina amin'i Sciatica
Rehefa mitana ny fanaintainan'ny sciatica, dia afaka mandeha mihoatra ny fiasa sy kalitao fiainana. Ireo fanazaran-tena dimy ireo dia afaka manampy anao hampihena ny fahasosorana amin'ny hozatra amin'ny vodin-doha, ny valahana ary ny lamosina. Tsindrio eto ambany raha hijery azy ireo.
Lahatsary: ​​Fanadiovana telo manohitra ny sciatica diso (Sciatica)
Ny fehin-kibo tsy tapaka dia ilaina amin'ny fitazonana ny elastisialy hozatra sy ny fiasa any aoriana, ary koa ny hozatry ny seza. Ireo fanazaran-tena telo ireto dia mampiseho anao ny fomba ahafahanao, miaraka amin'ny sciatica diso, afaka mivelatra mba hahatratrarana izany. Ny fanazaran-tena dia afaka manome anao mampihena ny fikorontanana eo amin'ny nerve, fanatsarana fiasa ary fahatokanana bebe kokoa.
Diso Sciatica = Famaizana an-tsakain'ny sciatica
Ny sciatica diso dia midika fa ny fahasosorana amin'ny nerve sciatic dia vokatry ny antony mekanika (fa tsy ny disc disc na ny prolaps) - toy ny hozatra tery sy ny fivezivezena iraisana.
Ny soritr'aretin'ny piriformis sy ny hozatra malemy (fa malemy) kosa dia mahazatra. Raha tsy izany dia ampirisihina ianao hanampy ireo fanazaran-tena ireo amin'ny mandeha an-tongotra, bisikileta na milomano - araka izay avelan'ny lamosinao.
Aza misalasala mitady ny boaty fitadiavana toro-làlana momba ny fanazaran-tena maromaro izay narotsakay taloha. Rehefa mahatsapa tsara kokoa ianao dia manoro hevitra fanazaran-tena og ireo fanazaran-tongotra ireo.
1. Mamelatra gluteal (mamelatra ny hozatry ny seza lalina)
Ity fanatanjahan-tena ity dia manenjana ny hozatry ny seza sy piriformis - ny farany dia hozatra matetika izay sciatica sy sciatica. Mandry amin'ny gorodona miaraka amin'ny lamosinao, tsara kokoa eo amin'ny tsihy fiofanana miaraka amin'ny fanampiana eo ambanin'ny vozonao. Avy eo, apiho ny tongotra havanana ary apetraho eo amin'ny feny havia.
Avy eo raiso ny feny havia na ny tongotra havanana ary sintomy moramora mankany aminao mandra-pahatsapanao fa mivelatra lalina any ambadiky ny feny sy ny hozatra gluteal eo amin'ny sisinao ahinjirinao. Tazomy mandritra ny 30 segaondra ny tady. Avereno indray avy eo. Natao tamin'ny seta 2-3 mihoatra ny lafiny roa.
2. Butt manohitra ny voditongotra (Fanatanjahan-tena miverina)
Ity fanatanjahan-tena ity dia manenjana sy manetsika ny hazondamosina.
Manomboka Position: Mijoroa eo amin'ny lafiny efatra amin'ny tohatra fanazaran-tena. Miezaha hitandrina ny tendanao sy ny lamosinao amin'ny toerany tsy miandany ary somary lava kokoa.
Ahinjiro: Avy eo ampidiro amin'ny ombelahin-tongony ny vodinao - amin'ny hetsika malefaka. Aza hadino ny mitazona ny curve tsy miandany amin'ny hazondamosina. Mihazona ny sakeliny 30 segondra eo ho eo. Fitafiana ihany no miverina mandrapahatonga anao mahazo aina.
Avereno in-4 5-3 ilay fanatanjahan-tena. Ny fanazaran-tena dia azo tanterahana in-4-XNUMX isan'andro.
Vakio koa: Fitsaboana onja - mety ho an'ny sciatica anao?
3. Fanatanjahantena fanatanjahantena sciatica ("flossing nerve")
Ny tanjon'ity fanazaran-tena ity dia ny fanetsiketsehana ny nerveo sciatic ary noho izany dia mety hampahory raha toa ianao ka eo amin'ny lozisialy sciatica. Izany no tokony hiandrasana mandra-paha-fehireharehany ny faharatran'ny sciatica. Mandry amin'ny gorodona miaraka amin'ny lamosinao, tsara kokoa eo amin'ny tsihy fiofanana miaraka amin'ny fanampiana eo ambanin'ny vozonao.
Avy eo, aforeto amin'ny tratrany ny tongotra iray avy eo ary atopao amin'ny tànana roa ny lamosin'ny feny. Apetaho amin'ny fihetsiketsehana fehezina sy tony ny tongotrao, raha entinao mankany aminao ny tongotrao.
Tohizo ny fanatanjahan-tena akanjo mandritra ny 20-30 segondra mandritra ny fofonaany lalina. Avy eo, apetraho ny lohalikao ary miverina amin'ny toerana fanombohana. Azonao atao ny mampiasa lamba famaohana na toy izany mba hahazoana fatotra fanampiny any amin'ny lamosin'ny feny.
Avereno imbetsaka ny fanatanjahan-tena 2-3 amin'ny andaniny.
4. Fitiavana aretin-kibo
Fihetsika mavitrika sy fanetsiketsehana izay miditra ao amin'ny hetsika mihemotra aoriana - fantatra ihany koa amin'ny fanitarana.
Ity fanatanjahan-tena ity dia mitatra sy manetsika ny lamosina ambany amin'ny fomba malefaka. Mandry eo amin'ny kibonao ary tohizo ny sela miaraka amin'ny felanao manatrika ny tany. Ataovy eo amin'ny toerana tsy miandany ny tendanao (tsy miondrika) ary ahidino moramora amin'ny alàlan'ny fametahana tsindry amin'ny tananao.
Tokony hahatsapa fihenjanana kely ianao amin'ny hozatrao sy ny lamosinao raha mihodina ianao - aza mandeha lavitra izany. Mihazona ny toerana mandritra ny 5-10 segondra. Avereno atao miverimberina mandritra ny 6-10.
5. tongotra an-tratrany (fanatanjahan-tena amin'ny lamosina ambany sy seza)
Ity fampiharana ity dia mikendry ny fampitomboana ny hetsika ambany sy ambany ahinjiro ny hozatra amin'ny seza sy ny lamosina ambany. Mandry amin'ny gorodona miaraka amin'ny lamosinao, tsara kokoa eo amin'ny tsihy fiofanana miaraka amin'ny fanampiana eo ambanin'ny vozonao Alefaso hiampanga anao ny tongotrao mandra-pahatongany ho amin'ny toerana miondrika.
Avy eo, apetraho aminao ny tongotra iray mandra-pahatsinao fa mihosina moramora ao amin'ny seza sy ao ambany lamosina. Mihazona ny tadiny mandritra ny 20-30 segondra ary avereno in-3 isaky ny andaniny.
Raha tsy izany, azonao atao ny manondrotra ny tongotra roa mankany amin'ny tratra - saingy atolotray anao raha tsy izany ny fanaintainanao mangirifiry, satria mametraka tsindry kely avo kokoa amin'ireo kapila ao ambany ao ambany.
6. Fitaovana fanamorana
Ny tanjon'ity fanazaran-tena ity dia ny faninjenana ny lamosin'ny feny ary indrindra ny hozatra hamstrana (ao ambadiky ny feny). Betsaka ny olona manao fanatanjahan-tena ity - satria heverin'izy ireo fa tokony hiondrika ny lamosinao ianao rehefa mivelatra, tsy maintsy hotsapaina io ary esorina satria mametraka tsindry anatiny any amin'ireo disc disc intervertebral (ireo rafitra malefaka eo anelanelan'ny vertebrae).
Mijoroa mitsangana ary apetraho eo ambadiky ny tongotra amin'ny fanoherana matevina -, ohatra, ny tohatra. Avelao hivezivezy amin'ny tongotrao ny tongotrao ary avy eo hiroborobo mandra-pahafatinao fa mivelatra tsara ao an-damosin 'ny feny eo am-baravarana.
Mihazona ny tadiny mandritra ny 20-30 segondra ary avereno in-3 isaky ny tongotra.
Inona no azoko atao manoloana ny fanaintainan'ny fanaintainana sy ny sciatica?
1. Fanatanjahan-tena ankapobeny, fanatanjahan-tena manokana, fanitanana ary asa atao atoro, fa mitoera ao anaty fetra fanaintainana. Roa amin'ny dia 20-40 minitra no mandeha tsara ho an'ny vatana sy hozatra marary.
Vokatra natolotra ho an'ny fanaintainana noho ny fanaintainan'ny nerve
PEJY NEXT: Tokony ho fantatrao ny mikasika ny faharatsiana ao ambadika
Tsindrio etsy ambony hanohy mankany amin'ny pejy manaraka.
(Miezaka izahay hamaly ireo hafatra sy fanontaniana rehetra ao anatin'ny 24 ora)
Saripika: Wikimedia Commons 2.0, Creative Commons, Freestockphotos ary nandefa fandraisana anjara tamin'ny mpamaky.
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/gluteal-uttøyning.jpg?media=1648573622 417 700 loza https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 loza2016-07-30 22:46:212019-02-23 18:19:316 Fanazarana hanoherana ny sciatica diso
Fitsaboana vaovao ny fanaintainan'ny aretin'ny taolana tsy mahomby kokoa noho ny fanafody! FAMPIANARANA: Fifandraisana eo amin'ny bakteria mahazatra sy ny eczema